जापानमा विवाह दर्ता गर्न के–के डकुमेन्ट चाहिन्छ ? विवाहको प्रकृया कस्तो हुन्छ ? | Nepali In Japan
जापानमा विवाह दर्ता गर्न के–के डकुमेन्ट चाहिन्छ ? विवाहको प्रकृया कस्तो हुन्छ ?
January 25, 2018 March 30, 2021
विभिन्न कारणले नेपाल छाडेर विदेशमा बसोबास गर्दै आइरहेका नेपालीहरुले विदेशमा नै विवाह गर्ने चलन नयाँ होइन । विदेशमै ‘सेटल’ भइसकेका हुन या ‘करियर बनाउदै गरेका’ प्रेमी प्रेमिकावीच होस् या बुवा आमाले नै जुराइदिएका जोडीहरु वीच विवाह जापानमा पनि हुनेगरेको पाइन्छ ।
हरेक देशमा विदेशीहरुको विवाह दर्ताका लागि आ-आफ्नै नियमहरु हुने गर्दछन् । आजको पोष्टमा हामी जापानमा रहेका २ नेपाली युवा युवतीवीच हुने विवाह र सोपश्चात गर्नुपर्ने कागजी कामका प्रकृयाका वारेमा बताउँदैछौं ।
जापानमा रहेको नेपाली समुदायमा २ किसिमले विवाह भएको देख्न पाइन्छ पहिलो नेपालमा गरिनेजस्तै गरि परम्परागत रुपमा विहे गर्ने, दोस्रो कानुनी रुपमा विहे गर्ने । विवाह जुन तरिकाले गरेपछि जापानमा विहे गरेको हो भन्ने आधिकारिकताका लागि विवाह दर्ता गर्नु अनिवार्य छ । सो कार्यका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरुका वारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं ।
विवाह पूर्वको तयारी
जापानमै हुनुहुन्छ र विहे गर्ने तरखर गर्दैहुनुहुन्छ भने विवाहपूर्व गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो तयारी भनेको आर्थिक र मानशिक रुपमा आफुलाई तयार राख्नु, विहेपछिको जिन्दगीको मोड तय गर्नुका साथसाथमा विवाह दर्ता, श्रीमान् वा श्रीमतीको आवास अनुमति परिवर्तन गर्ने नगर्ने आदि कुरामा पहिले नै सोचविचार गर्नुपर्छ । विहे गर्दैमा डिपेन्डेन्टका रुपमा जापानमा बस्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन । भाषा स्कुल पढ्दापढ्दै विहे गर्ने सोचले स्कुल नै नगएका कारण विहेपछि डिपेन्डेन्ट भिषाका लागि आवेदन दिंदा अस्वीकृत भई नेपाल फर्केकाहरु पनि छन् । ति विषयहरुमा पनि विवाहपूर्व नै तयारी गर्नुपर्छ ।
विवाह दर्ताको प्रक्रिया
विवाह गर्नका लागि उमेर पुगेका दुवैजना जोडी जापानमा हुनुहुन्छ र यहाँ नै विवाह दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने केही कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जापानमा रहेर नेपाली-नेपाली अथवा नेपाली र जापानीबीचको विवाह गर्नको लागि आफु बस्दै गरेको सिटी अफिसमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ साथसाथै नेपाली दूतावासमा पनि त्यसको दर्ता प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जापानमा विवाह दर्ता गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाइँहरु अविवाहित भएको प्रमाणपत्रका साथै तपाई र तपाईको बुवा आमासंगको नाता प्रमाणित पत्र नेपालमा तपाइँको स्थायी ठेगाना रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका बाट लिनुपर्ने हुन्छ । साथसाथै तपाईको जन्मदर्ता पनि आवश्यक हुन्छ । ति कागजहरु बनाउनका लागि लागि तपाई आफ्ना आमाबुवा वा दाजुभाईलाई आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ । उल्लेखित कागजातहरु केटापक्ष र केटी पक्ष दुवैको आवश्यक पर्छ ।
हालैका दिनमा भने अविवाहित प्रमाणपत्र निकालेर त्यसलाई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभागबाट प्रमाणिकरण गरि जापान झिकाउनुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरिने प्रमाणिकरणका लागि तपाई आफ्ना कोही आफन्तलाई जिम्मा दिन सक्नुहुन्छ । प्रमाणिकरणका लागि प्रति कागजात रु ५०० लाग्छ । प्रमाणिकरणका लागि सानो एउटा फारम पनि भर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यो लिंकमा गई डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभागको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर निम्नानुसार छ :
कन्सुलर सेवा विभाग,
फोन नं +977-01-4260121 , +977-01-4260121
परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रमाणिकरण भएका कागजातहरुलाई जापानमा मगाउनुपर्ने हुन्छ । संगै लिएर आइदिन सक्ने कोही भए साथमै नत्र हुलाक सेवा विभागमा गई EMS गरेर पनि मगाउन सकिन्छ । नेपालबाट जापानमा डकुमेन्टहरु कसरी मगाउने भन्ने विषयमा जानकारी चाहानुहुन्छ भने यो लिंकमा क्लिक गरि हेर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित छाप लगाएको अविवाहित प्रमाणपत्रलाई जापानस्थित नेपाली दूतावासमा गएर पुनः प्रमाणिकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रमाणित गर्नको लागि राजस्व प्रति कागज ६००० येन तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली राजदूतावास टोकियोको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर निम्नानुसार छ :
Fukukawa House B,6-20-28 Shimomeguro, Meguro-Ku,Tokyo 153-0064
तपाइँले दूतवासबाट प्रमाणित गरेको अविवाहित प्रमाणपत्रलाई जापानमा दर्ता भएको र अनुवाद गर्न अनुुमति पाएको कम्पनीमा गई जापानी भाषामा अनुवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । जापानी भाषामा अनुवाद गर्ने कम्पनीको छाप सहितको उक्त कागज र त्यसको सक्कल, पासपोर्ट र आवास अनुमति पत्र (रेसिडेन्स कार्ड) सहित तपाइँ बसोबास गर्नुभएको कुयाकुस्यो अथवा सियाकुस्योमा गएर विवाह दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुयाकुस्यो अथवा सियाकुस्योमा विवाह दर्ताका लागि फारम भर्नुपर्ने हुन्छ, जापानी भाषामा नै लेख्नुपर्ने भएकाले तपाईलाई राम्रोसंग लेख्न पढ्न वा बोल्न आउँदैन भने साथीहरुको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ । फारम भर्ने प्रक्रियामा त्यहाँकै कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गर्नुभएमा आवश्यक सहयोग पाउनुहुनेछ । फारममा भर्नुपर्ने जानकारीहरु सबै सही हुनुपर्छ । नबुझेको ठाउँमा दोहोर्याएर सोध्नुभए पनि हुन्छ । फारममा साक्षीहरुको व्यक्तिगत जानकारी समेत लेख्नुपर्ने हुन्छ ।विवाह गर्नको लागि दुुईजना ( केटातर्फ एक र केटीतर्फ एक ) २० वर्ष उमेर पुगेको साक्षी वस्नुपर्ने भएकोले साथी वा आफन्तहरुलाई लिएर जानुहोस् । साक्षी जापानी वा नेपाली नागरिक भए हुन्छ । साक्षीको हाङ्को पनि लगाउनुपर्ने भएकोले त्यसको तयारी पनि गर्नुहोला ।
त्यसो त कतिपय कुयाकुस्यो अथवा सियाकुस्योको नियम अनुसार विवाह दर्ताको प्रक्रिया फरक-फरक हुने गर्दछ । विवाह दर्ता गर्नका लागि कागजपत्र तयार पार्नुअगावै एकपटक आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा अफिसमै गएर सरसल्लाह गर्नु राम्रो हुन्छ । जस्तै टोकियोकै एक कुयाकुस्योको लागि आफूले तयारी गर्नुपर्ने कुराहरुमा पासपोर्ट र त्यसको जापानीमा अनुवाद गरेको कपी, अविवाहित रहेको प्रमाणपत्र, कुनै देशको मामलामा भने विवाह गर्न मिल्ने उमेर यतिदेखि यतिसम्म भनेर तोकिएको कागजात पनि हुँदो रहेछ त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन मिल्ने देशहरुबाट भने त्यो प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको जापानी भाषामा अनुवाद गरेको समेत । त्यसैगरी नेपालीको हकमा अविवाहित कागजपत्र र वावाआमासँगको नाताप्रमाणित कागजपत्र पनि सक्कली र जापानी भाषामा अनुवाद गरेको दुवै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कोही कुयाकुस्यो वा सियाकुस्योहरुमा माथि उल्लेखित मध्ये कुनै डकुमेन्ट नचाहिने पनि हुनसक्छ । दर्ता गराउने अफिस अनुसार केही नियमहरु फरक हुनसक्ने भएकाले दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नुअगावै सरसल्लाह गर्नुभयो भने अनावश्यक झण्झट हुँदैन ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि विवाह दर्ता सम्पन्न हुनको लागि लगभग एक महिनासम्म लाग्न सक्छ । तपाइँले भरेर बुझाउनुभएको सबै डकुमेन्टहरु वडा कार्यालयले होमुक्योकु ( न्याय मन्त्रालय, कानूनी मामला ब्यूरो ) मा पठाउने काम गर्दछ । होमुक्योकुमा आवश्यक परेमा दुवै जनालाई बोलाउन सक्छ, विवाह दर्ताका लागि बुझाएका कागजातहरुमा लेखिएका कुरा तपाईलाई पनि जानकारी हुन आवश्यक छ । होमुक्योकुबाट सबै काम सकिएपछि तपाइँले केक्कोन तोदोके ज्यूरीस्योमेइस्यो ( विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र ) निकाल्न पाउनुहुन्छ । उक्त पेपरलाई पुनः अंग्रेजीमा अनुवाद गरि दूतावासमा गएर विवाह दर्ता भएको सूचना दिन सक्नुहुनेछ । दूतावासबाट प्राप्त भएको प्रमाणपत्र विवाह पश्चात डिपेन्डेन्टमा भिसा एप्लाइ गर्न लगायत अन्य कामको लागि आवश्यक पर्छ ।
उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको खण्डमा तपाइँहरु वैधानिक रुपमा जापानमा श्रीमान-श्रीमती भएर रहन सक्नुहुनेछ । हामी तपाइँको वैवाहिक जीवन सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्दछौं । यो जानकारी तपाइँलाई उपयोगी लाग्यो सेयर गरिदिनुहोला है, अरुलाई पनि काम लाग्छ नि हैन ?
Prevजापानमा पार्ट टाईम काम खोज्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
Nextयस्तो हुन्छ जापानमा भिसा थप्ने प्रक्रिया